Global Voices teny Malagasy » Anaty ady amin’ny valanaretina, ‘tonga izao ny fotoana’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Mey 2021 10:01 GMT 1	 · Mpanoratra Shivanee Ramlochan Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, COVID-19, Ny Tetezana - The Bridge
Voninkazo lantana mamelana ary maka ny endriky ny viriosy COVID-19 . Sary  an'i Jim & Robin Kunze  tao amin'ny Flickr, CC BY-NC 2.0 .
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Manoloana ny fitomboan ‘ny tahan ‘ny valanaretina COVID-19 ao Trinidad & Tobago, dia nampiditra andiana fepetra  vitsivitsy ny governemanta tamin'ny 29 Aprily, isan'izany ny fanakatonana ireo toerana fisakafoanana, fanaovana fanatanjahantena, ary toerana fivavahana, ary ny fampidinana—hatramin'ny 25 isanjato ny fahafahana—ny tetezana an-dranomasina sy ny sidina an'habakabaka eo anelanelan'ireo nosy roa.
Tamin'ny 3 May, vao mainka nihamafy kokoa  ireny fepetra ireny taorian'ny nanambaran'i Dr. Maryam Abdool-Richards, Lehiben'ny mpitsabo, fa mipetraka “eo amoron-tevana” ny firenena, miaraka amin'ny hoe ao anatin'ny roa herinandro dia mety ho tratra ny fetra farany zakan'ny rafitra natao ho an'ny fahasalamàna raha toa tsy mitsahatra ny fitomboan'ny tahan'ny fidiran'ny aretina amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny isan'ireo marary mila mahazo fikarakaràna maika be na mila ireo sampana fikarakaràna manokana.
Nanome fampieritreretana marobe ilay Trinidadiàna poeta, Shivanee Ramlochan, mba hanehoana ny fomba azon'ny olona hitrandrahana lavitra sy hikarohana làlana hiatrehana izany ao anatin'ity raharaha manga ity. Misy dika nokiraina avy amin'ny tantara nosoratany  averina avoaka etsy ambany.
Izao anio izao. Tonga izao ny fotoana.
Mitorombina anaty zavatra hafahafa isika, karazana fahakendàna ara-pihetsehampo. Tsapantsika ny fiantraika isanandron'ny fetran'izay azon'ny vatantsika zakaina. Ny sasany amintsika tsy nanoroka akory ireo zanaky ny mpiray tampo tratr'izany nandritra ity valanaretina ity. Ny sasany tamintsika tsy afaka akory nitsidika ireo dadabe sy nenibentsika, na ny fasana nilevenany. Misy ireo zazakely izay ny tena miraikitra ao an-tsainy rehefa mihevitra ny endriky ny zanak'olombelona dia ilay manao maska (sarontava).
Ahoana no hiatrehantsika an'io? Tsy haiko izay fomba atao hahatafavoaka antsika amin'io.
Betsaka ny zavatra nahemotro satria resy lahatra aho fa diso làlana, tsy tsara tefy, na ny ratsy indrindra, niofo niala tamin'ilay “tokony ho izy” nandrafetana ahy tany aloha fony aho tonga teto amin'ity tany ity. Nohataveziko izy, nokendaiko, navadiko ho mpikomy, tsy tomponandraikitra sy marefo. Ary dia tena io vatana io no nalaiko, ary dia tena tsy naneho fanajàna azy aho na kely aza. Nandritra ny valanaretina, nanontany tena aho momba izay antony nahatonga ireo vatana tsara lavitra noho ny ahy ho tsy tazako eto intsony, nahavita zavatra tsara kokoa, nefa ny ahy mbola mitoetra.
Toa tsy valinteny ny hoe fitiavana, na fandriampahalemana, na ny hanina isanandro rehefa tsy mahazo dhal na ny ho haniny isanandro ny tsirairay[…] na vary. Saingy tena tsapako, tena tsapako fa ianareo no valin'ireo fotoana kely tsirairay izay angatahana antsika mba hiatrika izany misimisy kokoa. Ny tsy fahalavorarianareo. Ny korontana sy ny fitroarana masina ataonareo. Ireo ranomaso mampilatsaka hatramin'ny ranon-delo sy ny dia an-tongotra tsy mankaiza ataonareo. Ny dutty wine (fanamarihan'ny mpandika: fomba fandihin'ireo avy ao Jamaika) ataonareo amin'ny efatra ora maraina manoloana ny fitaratra miaraka amina toaka puncheon [rhum] antsasaky ny tavoahangy. Ireo vavaka eo am-pandohalihana ataonareo amin'ilay Andriamanitra nahababo indray ny fonareo na ny fianarana ny hoe manao ahoana izany avelo/matoatoa. Tsy haiko, saingy tiako ny ho eto, mikiry. Amin-kerimpo. Mahatsikaiky. Angamba aza hadalàna mihitsy. Ary ny manahirana dia ilay finoana hoe mendrika izany fahasoavana izany aho. Angamba mety mahatsapa ny toy izany koa ianao.
Araka izany, izao no fotoana. Ny fotoana. Hifanatrehana amin'ilay olona nampijaly anao nandritra ilay valanaretina, na mety ho nandritra ny androm-piainanao manontolo. Hanapahana tanteraka ny amin-dry zareo. Hitenenana hoe eny, eny letsy a. Hitenena hoe tsia, tsia letsy a. Hividianana akanjo izay heverinao fa mba hanome endrika matavitavy anao, ary miedinedina mitafy azy amin'ny fomba mampodi-mandry eraky ny lalantsara, satria tsy misy azo ilazana anao rehefa mitafy azy afa-tsy ny hoe manja ao anatiny. Izao no fotoana hakàna ireo fampindramam-bola goavana avy amin'ilay banky manankarena manana ireo fahafahana rehetra tsy sahinao nidirana hatrizay. Hinoana fa ianao dia afaka hamerina izany, amim-boninahitra. Izao no fotoana hitaizàna sàka iray. Izao no fotoana hampitsiriana volombava mahatratra efa ho efatra metatra. Izao no fotoana anekenao fa tratry ny hakiviana ianao. Izao no fotoana isokafan'ny taolan-tratranao ho toy ny tànana efa taolana ary ny babangoana ao anaty dia fenoinao voninkazo, mozika, rongony, filàna firaisana ara-nofo tsara, andriamanibavy sy sôkôlà.
Tsy hoe fotsiny noho ny tsy fahafantarantsika izay fotoana sisa tavela. Fa marina foana izany hatrizay. Tsy ny valanaretina no namadika ny zavatra rehetra ho marina kokoa, tahaka ny nanoritany hoe hatraiza no fetran'ny safidy ho an'ireo mahantra, ireo marefo, ary ireo antsoina hoe Firenena Tatsimo rehefa niatrika ny zavadoza nentin'ny kapitalisma. Tsy mbola tonga ny fotoana satria tsy ampy antsika ilay izy.
Izao no fotoana satria mendrika anao ny segondra tsirairay handriana fahalemana azonao angatahana ho anao manokana eto ambonin'ity vato mihodinkodina nanjary tsy niraika tampoka teo ity. Hano daholo ny mofomamy sôkôlà. Aza asiana vidiny izay fahamasinana. Tsy misy ny mpanavotra, fa *ianao* no misy.
Ary zavadehibe izany.
Ny fitambarana poezia tamin'ny 2017 an'i Shivanee Ramlochan, Fantatry ny Rehetra Fa Izaho dia Manelohelo toa Avelo, dia voafantina hahazo ny loka Felix Dennis Award 2017 ho an'ireo fitambarana poezia voalohany tsara indrindra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/05/152507/
 vao mainka nihamafy kokoa: https://wired868.com/2021/05/03/hospitals-just-10-days-from-being-overrun-street-food-and-non-essential-retail-face-imminent-shutdown/?fbclid=IwAR0K0tdrIwIBojdUiaBL_51EDckx2237awWcSlPMsXLv2Ef2jWhUMVzo6zU
 tantara nosoratany: https://www.facebook.com/shivanee.ramlochan/posts/10165203340215302